Farmaajo oo Khayre ku carqaladeeyay Garoonka Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa is-hortaag ku sameeyay Xasan Cali Khayre, oo Ciidanka ilaaladda Garoonka si xun ula dhaqmeen xili uu doonayay inuu qeybta diblomaasiyiinta reer galbeed degan yihiin ee Xalane u gudbo.
Xogta Keydmedia Online heshay ayaa sheegaysa in gaariga Khayre la socday loo diiday inuu gudaha gallo, iyadoo taasi ka dhalatay dood dhexmartay ilaaladiisa iyo kuwa Garoonka, iyadoo markii dambe xaaladda lasoo dhexgalay, sidaasina RW hore loogu gudbiyay Xalane, oo kulan ku lahaa.
Siyaasiga C/raxmaan Cabdishkuur ayaa sheegay in arintan uu soo gaarsiiyay Wasiir katirsan Galmudug, oo Garoonka kasoo dhoofayay shalay xiliga la qash-qashaadayay Xasan Cali Khayre, isagoo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Ra'iisul Wasaaraha loo adeegsado Ciidankii uu 3-da sano dhisayay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Khayre kula dagaalay ka aragti duwanaanshihiisa doorashadda iyo inuu uga shakiyay maleegida qorshe loogala wareegayo xukunka waqtigiisa dhamaanayo.
0 Comments Topics: farmaajo garoonka diyaaradaha khayre nisa